Soomaaliya Oo Ka Qaybgashay Shirka Duulimaadyada Hawada, Iyadoo Somaliland Ka Maqantahay – somalilandtoday.com
Soomaaliya Oo Ka Qaybgashay Shirka Duulimaadyada Hawada, Iyadoo Somaliland Ka Maqantahay
Soomaaliya Oo Ku Faantay In Ay Xoriyad Kaga Qaybgashay Shirka Maamulka Hawada Iyo Duulimaadyada Iyo Somaliland Oo Wali Wahadalladii Istaagay Rejjo Ka Qabta
(SLT-Hargeysa)-Shirkan oo ah heer Wasiir, kana dhacay Magaalada Montreal ee dalka Canada, isla markaana ay qabanqaabisay Hay’adda QM u qaabilsan Maamulka Hawada iyo duulimaadyada ICAO, ayey markii ugu horaysay ka qaybgaleen wefti ka socda Maamulka Federaalka ah ee Soomaaliya oo uu hogaaminayo Wasiirka Gaadiidka iyo duulista Hawadu. Sida laga baahiyey Telefishanka Dawladda, weftiga waxa xubno ka ah Maareeyaha Hay’adda Duulimaadyada Soomaaliya, kuwaasoo shirka kaga qaybgalay magaca cida maamusha Hawada Soomaaliya, laakiinse shirkan waxaan qayb ka ahayn Somaliland oo ka madaxbanaan Soomaaliya, hawadeeddana iyadu maamusha. Maxamed Cabdilaahi Oomaar, Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya oo la hadlay Telefishanka Dawladda ayaa sheegay in ay shirka ku soo bandhigeen qorsheyaasha maamulkiisa ee la xidhiidha maamulka Hawada.
“Soomaaliya ilaa iyo burburkii markii uu ku dhacay dagaalkii Sokeeye waa markii ugu horaysay ee ay ka soo qaybgasho shirkan iyadoo xor ah oo aan cidna hoos-tegin ee u yimi keliya in ay xubin ka yihiin oo aanay ICAO xukumin” ayuu yidhi Wasiir Oomaar.
Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dawladda Somaliland tan iyo markii ay Xukuumadda Farmaajo bilowday qorsheyaasha ay kula wareegayso Maamulka Hawada, waxaanay dadka Somaliland isweydiinayaan Xukuumadda Madaxweyne Muuse ma waxa ay raali ka tahay in Hawada Hargeysa laga xukumo Muqdisho, mise waxa jira qorsheyaal kale oo ay gorgortan kagala jirto caalamka sidii Hawaddeeda looga madaxbanaanayn lahaa Soomaaliya.
waxa kale oo iyaduna Qodob labaad oo isweydiin leh noqonaysa sababta ay Hay’adda ICOA ee gacanta ku haysay Maamulka Hawada Soomaaliya shirkan ugu casuuntay Dawladda Federaalka ah oo qudha, haddii ay Somaliland diidday in ay ka qaybgashana dib ugu dhigi wayday in dhinac qudha uu ka qaybgalo Shirkaasi.
Marka dib loogu noqdo wadahadalada istaagay ee u dhexeeyey Somaliland iyo Soomaaliya, ayaa qodobada ugu muhiimsan ee lagu heshiiyey kulamadii ka dhacay London, Stanbul iyo Dubai, waxa kamid ahaa sidii ay maamulka Hawada iyo qaybsiga dhaqaalaha ka soo baxa labada dhinac u maareyn lahaayeen.
Hase yeeshee wadahadaladaasi oo istaagay sanadkii 2014-kii, laguna guul-daraystay in dib loo bilaabo, ayaa waxa muuqata in ay dawladda Somaliland ka rejjo dhigtay, sida uu horaantii todobaadkan u sheegay Wargeys ka soo baxa Magaalada Hargeysa Wasiirka Arrimaha dibada iyo Iskaashiga Caalamiga Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon.
“Mawqifka aynu ka taagan nahay, weynu muujinay, oo qodobo ayeynu ka soo saarnay, weyna jiraan wadamo badan oo xiisaynaya in labada Dal wada hadlaan,balse ilaa hadda Somaliya ayaan u muuqan inay diyaar u tahay wada hadalada, waxaana jira Wadamo badan oo xaqiiqada og oo doonaya in Somaliland madax banaanideeda ku teegaraan, si aqoonsigeeda u hesho, inaguna dadaal baynu ugu jirnaa iyo inaynu helno aqoonsi caalamiya”ayuu yidhi Faratoon.
Ugu dambeyn, Xukuumadda Madaxweyne Biixi ayaa laga sugayaa talaabo Jawaab u noqota Su’aalaha khuseeya arrinta Maamulka Hawada ee ay Bulshada Somaliland isweydiinayso, ugu yaraana ay raacdo talooyin badan oo qayb kamida loogu soo jeediyey Qormooyin Gobanimonews todobaadyadii la soo dhaafay baahisay.